Himalaya Dainik » सासुका असाध्यै प्यारी हुन्छन् यी ४ राशिका बुहारी !
कुनै पनि घरको एउटा चाहना हुन्छ कि घरमा सुशील बुहारीको प्रवेश होस्, जो घर राम्रोसँग सम्हाल्न सकोस्। यस्तै हरेक कन्या पनि चिन्तित हुन्छिन् कि आफ्नो हुनेवाला घरका सदस्य कस्ता हुने हुन्छन् भनेर ।
शास्त्रअनुसार ४ राशिका महिला आफ्नो श्रीमानको घरमा पनि सबैको प्यारी हुन्छिन्, खासगरी आफ्नो सासुको। यी राशिका महिला घरमा सुख र खुशी लिएर आउछन्।
यो पनि पढ्नुहोस्- ग्रहको सेनापति मंगल,मेष राशिमा प्रवेश गर्दा यी ७ राशि मालामाल !
पुस १४ गतेबाट ग्रहको सेनापति मंगल ग्रह मेष राशिमा प्रवेश गर्दैछन् । मङ्गल सौर्यमण्डलमा सूर्यबाट चौथो ग्रह हो। पृथ्वीबाट यसको सतह रातो देखिन्छ, जसकारण यसलाई रातो ग्रहको नामले समेत चिनिन्छ ।
मेष राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, मीन राशि
के के फाईदा पुग्छ त ? थप जानकारी भिडियोमा-